Weligaa ma ka welwelsan tahay ee ku saabsan wada badiyay music ka iPod xitaa ka dib markii ay u taageerto ilaa? Ma ogtahay in Lugood ma dhab ahaantii dib ilaa files music cayriin aad? Waxaan doonayaa in aan idin soo bandhigno in software cajiib ah in si fudud iyo si ammaan ah dib doonaa files music cayriin aad la kaliya click ah.
Habka ugu fiican ee aad gurmad music iPod waa adigoo isticmaalaya Wondershare TunesGo . TunesGo waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan app la interface ah mid aad u fudud. Halleeyo lillaahinimada ee app wuxuu sameeyaa aad u fududaato in la isticmaalo ka badan Lugood.
Si ka duwan Lugood in oo kaliya ilaa taageeray warbixinta of music file music laftiisa adiga oo aan, TunesGo run ahaantii ilaa taageeray file aad music dhabta ah iyo macluumaadka ku saabsan file music isku daro. Tani waa qalab ammaan aad music taageerto kor u dhigaysa.
Casriyaynta Lugood ama your computer aad keeni kartaa Lugood gurmad si musuqmaasuq ah oo sidaas daraaddeed baan idiinku soo lumiso music dib iyo music laftiisa. Taasi ma aha in kiiska la app TunesGo. Your gurmad had iyo jeer waa amaan haddii aad u cusboonaynta app TunesGo ama aad u cusboonaynta your computer. Waxaad gurmad inuusan marna demin doono musuqmaasuqa oo had iyo jeer laga heli doonaa mar kasta oo aad u baahan tahay si ay u soo celiyaan.
Waa Dhammaan hababka ugu fudud oo sahlan oo ay raacaan laakiin app TunesGo waa ka fudud yahay. In this article, waxaana idin tusin doonaa sida loo raad raac aad music iPod.
IPod music kaabta la TunesGo Wondershare
First of dhan, aynu dib u kor u isticmaalaya TunesGo Wondershare codsiga, ka dibna waan arki doonaa sida ay u gurmad isticmaalaya maktabadda caadi Lugood.
Back la TunesGo waa ka fudud oo dhaqso inay sameeyaan. Si aan ku bilaabo la Wondershare TunesGo,
Talaabada 1: Download iyo rakibi app TunesGo Wondershare on your computer.
Download u Win Download u Mac
Talaabada 2: Hadda fur Wondershare TunesGo iyo xiriiriyaan iPod in kombiyuutarka via USB.
Talaabada 3: Laga soo bilaabo dhinaca bidix ee app TunesGo ah, waxaad arki doontaa magaca iPod guji kaliya ah oo aad loo soo bandhigi doonaa faahfaahinta iPod ah.
Talaabada 4: Riix gurmad in gurmad xogta aad sida kaaga muuqata sawirka hoose.
Talaabada 5: Waxaad heli doontaa suuqa kala pop up waydiinaya meesha aad rabto in aad badbaadin ilaa dhabarka ah. Si fudud u dooro meesha aad rabto in aad badbaadin dhabarka ilaa iyo riix ok.
Dhoofinta bilaabi doonaan iyo marka ay dhamaystiran tahay, waxaa laguu keenay in doonaa in la dhameeyo.
Mid ka mid ah sababaha aan jeclahay software tani waa sababta oo ah waxa uu leeyahay hawlaha aad u badan.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad nuqul ka music aad telefoon si aad u computer laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad nuqul ka music i siiyo computer ah in aad telefoon. Waxaa sida caadiga ah aan caadi in aad nuqulka music ka iPhone si aad u computer, aad nuqul karaa oo kaliya music ka your computer si aad iPhone wakhtiga intiisa badan, laakiin app taasi suurtogelinaysaa in aad nuqul ka music iyo ka iPhone iyo computer.
Waxa kale oo ay taageertaa qalabka android iyo waxaad isticmaali kartaa qalabka android aad ku Lugood. Waxaad u malayn kartaa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo qalab Android aad ku Lugood laakiin TunesGo Wondershare waxaa suurtagal ah. Waxaa kale oo aad u ogolaanaya in ay gurmad iyo soo celiyo qalabka Android aad. Waxaa badasha music inay qaab ku habboon ee aad telefoon oo sidoo kale u ogolaataa kala iibsiga u dhexeeya telefoonada. Si iPhone ah in telefoonka ah android iyo ka android inaad telefoon kale android ama ka iPhone ah wareejin karaan faylasha aad ka telefoonka ah android si iPhone kale oo sidoo kale ka iPhone ah. Waxaad arki, waxa ay taasi wax uun fudud aad u.
Dib iPod maktabadda Lugood
Talaabada 1: In dib u isticmaalaya Lugood, u furan Lugood xiriiriyaan iPod in aad PC ama Mac ama Connect aad iPod in aad PC ama Mac ka dibna la furo Lugood. Amarkan wuxuu aad samayn waxba ma ahan. Riix icon iPod dhinaca bidixda ah ee kore sidii la arkay sawirka hoos ku qoran.
Talaabada 2: Waxaad arki doonaa faahfaahinta iPod on Lugood. Hadda hoos u dhaqaaq hayaan dooro "Tani computer" ka dibna ku dhuftay "Haatan ilaa". Back qaadan doona daqiiqado yar tahay geeddi-socodka si uu u dhameystiro. Waxay qaadan kartaa saacadood xitaa ku xiran tahay qadarka xogta aad qabto in aad iPod.
Waxaad si guul ah dib ayaa aad iPod on maktabadda Lugood iyo soo celin karaa mar kasta oo aad rabto. Haddii aad dib u la TunesGo ama la Lugood, xogta aad tahay mid amaan ah oo laga heli karo mar kasta oo aad u baahan tahay in.
Backing la TunesGo waa ka dhaqso badan taageero la Lugood sida aysan u baahan tahay in aad u hagaagsan ama nuqul ka mid ah xogta lagu ogaanayo sida Lugood sameeya oo qaadataa waqti aad u badan. Sidoo kale, TunesGo taageeray ilaa music kaliya halka Lugood taageeray walba badan ee aad iPod taas oo ay qaataan waqti ka badan app TunesGo.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka iPod Nano
Sida loo dar music in classic iPod ka PC iyo Lugood
> Resource > iPod > Simple iyo Safe Habka ay u kaabta iPod Music One Click